Mialà sasatra miaraka amin'ny horonantsary Ice Cream Flavour an'i Ben & Jerry - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Mialà sasatra miaraka amin'i Flavour Ice Cream natahotra an'i Ben & Jerry
Mialà sasatra miaraka amin'i Flavour Ice Cream natahotra an'i Ben & Jerry
by John Squires Aprily 29, 2015
Na dia mbola volana vitsivitsy miala ny fiandohan'ny fahavaratra aza isika, dia efa manafana ny andro amin'ny faritra maro amin'ny firenena, midika izany fa ho re tsy ho ela ny fihomehezana mahazatra ny gilasy. Raha ny marina dia nandeha nitety ny tanànako nandritra ny herinandro maromaro izy, ary mino ianao fa nalefako nidina tany aminy nandritra ny fotoana vitsivitsy.
Eny, vanim-potoana gilasy tokoa io indray mandeha, ary androany dia te hizara aminareo tetik'asa kely mahafinaritra aho izay azo antoka fa hampisy ny filanareo amin'ny tsindrin-tsakafo mamy.
Roa taona lasa izay, artista Frank Browning ary niara-niasa aho ary namorona andiana ranomandry horonantsary mahatsiravina nataon'i Ben & Jerry, izay navoaka tao amin'ny bilaogiko Freddy eny amin'ny habakabaka. Nahafinaritra be tokoa ny nivoahanay tamin'ny tsiro marani-tsaina ary koa ny volavolan-tsarimihetsika izay manintona ny maso, ary heveriko fa tonga ny fotoana hanomezana fiainana faharoa eto amin'ny tranonkala ny zavakanto.
Ka ahoana ny ho fijeriny raha toa ka nitodika tany anaty sarimihetsika i Ben & Jerry Play Play Play, The mamirapiratra, Halloween ary Army ny haizina lasa tsiron'ny gilasy? Mihady ao ambany raha te hahalala!
Tsindrio ny pejy 2 ho an'ny "The Human Centi Peach"!
Olona dimy tsy mampihoron-koditra mampihoron-koditra indrindra
Ilay lehilahy namono olona Jeffrey Dahmer farany dia nanambara ny antony nanaovany izany